ကုန်းဘောင်ခေတ်တုန်းက အမှန်တရားကို အသက်နဲ့လဲဝံ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်း – Lat Khat Than
ကုန်းဘောင်ခေတ်တုန်းက အမှန်တရားကို အသက်နဲ့လဲဝံ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်း
By လက်ခတ်သံPosted on November 11, 2019
ကုန်းဘောင်ခေတ်တုန်းက အမှန်တရားကို အသက်နဲ့လဲဝံ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူသည်မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ခစားသူများအကြားမှ မှန်မည်ထင်ရာယုံကြည်ရာကို ရဲဝံ့စွာပြောဆိုခြင်းကြောင့် ရာထူးမှ မကြာခဏ အချခံရပြီး အိမ်နိမ့်စံဘ၀ဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသော ၀န်ကြီးလည်း ဖြစ်၏။ သူကားယောအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်ဖြစ်ပါသည်။
မင်းတုန်းမင်းနှင့် မြောက်ဆောင်တော်မိဖုရားတို့၏မွေးစားသားအဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရ၏။ ယောမြို့ကို အပိုင်စားရ၏။ သို့ရာတွင် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ယူဆပြောဆိုသည်ကြောင့်ရာထူးမှ မကြာခဏ ချခြင်းခံရသည်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်က မင်းတုန်းမင်းကြီးနှင့် အယူအဆမတူ၍ တစ်ကြိမ်၊ က နောင်မင်းသားလုပ်ကြံခံရအပြီး ဗျစ်ရည်သည် ဆေးခါးကြီးနှင့်တူကြောင်း၊ အနည်းငယ်သောက်က အပြစ်မရှိကြောင်းပြောဆိုသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ရာထူး အချခံရသည်။ တတိယအကြိမ်ရာထူးချခံရပုံက သူမို့သာလုပ်ရဲသည်ဟု ဆိုရမည်။ အဖြစ်ကတော့ဤသို့တည်း……
တစ်ခါသော်မင်းတရားကြီး၏ သ ဘောလွဲမှားနေမှုကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် အစ်မ၊ နှမ၊ သမီးကညာအပ်နှင်းခြင်း၊ တံစိုးလက်ဆောင်ဆက်သခြင်းကို အကြောင်းပြုလျက်အတက်ပညာမရှိသူများကို ၀န်ကြီး၊ အမတ်စသည်ဖြင့်ခန့်အပ်ခဲ့သော် တိုင်းပြည်ပျက်တက်ကြောင်း ဘုရင်မင်းတရားကြီးအား မထောက်မညှာ ဝေဖန်ထောက်ပြ လျောက်ထားလိုက်သည်။ ဤတင်မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ စိတ်တော်ဆိုး၍ ဦးဘိုးလှိုင်အား သူ၏ဖခင်ယင်းတော်ဝန်ကြီးအား ကွပ်မျက်ခဲ့သော လှံကို ပြသလျက် ထိုးမည်ပြုရာ ရင်ကိုေ ကာ့လျက် “ထိုးတော်မူပါ ဘုရား” ဟု လျှောက်တင်ခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းက မထိုးပဲလှံကို ကိုင်၍ အတွင်းတော် ၀င်သွားသောကြောင့်သာ အသက်ချမ်းသာရာရလေသည်။ အခြားဝန်ကြီးများက အတွင်းဝန် ဦဘိုးလှိုင်အား ဤမျှတင်းတင်းမာမာ ဘုရင်ကို ပြန်မလျှောက်သင့်ကြောင်း ၀ိုင်း၍ ပြောကြသည်တွင် ဦးဘိုးလှိုင်မှ ပြန်ပြောကြား သော စကားမှာ တန်ဖိုးရှိလှပေသည်။ ဦးဘိုးလှိုင်က….
“ကျွန်ုပ်အား လှံဖြင့်ထိုး၍ သေရခြင်းကား မြတ်ပါ၏။ နေရာတိုင်းမင်းအလိုလိုက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးနေရပါမူ မကောင်းမှုဖြစ်ပွားလာပါက နိုင်ငံတော်ပျက်စီးခြင်းရောက်လေသည် ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သော် သေရကျိုးမနပ်” ဟူ၍ပင်ဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ဖြင့် မင်းလိုလိုက် မင်ြးုကိုက် မခစားသောကြောင့် တတိယအကြိမ်ရာထူးမှ ကျလေသည်။
ကုနျးဘောငျခတျေတုနျးက အမှနျတရားကို အသကျနဲ့လဲဝံ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးရှိပါတယျ။ သူသညျမငျးလိုလိုကျ မငျးကွိုကျခစားသူမြားအကွားမှ မှနျမညျထငျရာယုံကွညျရာကို ရဲဝံ့စှာပွောဆိုခွငျးကွောငျ့ ရာထူးမှ မကွာခဏ အခခြံရပွီး အိမျနိမျ့စံဘဝဖွငျ့ ကှယျလှနျသှားသော ဝနျကွီးလညျး ဖွဈ၏။ သူကားယောအတှငျးဝနျ ဦးဘိုးလှိုငျဖွဈပါသညျ။
မငျးတုနျးမငျးနှငျ့ မွောကျဆောငျတျောမိဖုရားတို့၏မှေးစားသားအဖွဈခြီးမွှောကျခွငျးခံရ၏။ ယောမွို့ကို အပိုငျစားရ၏။ သို့ရာတှငျ ဟုတျတိုငျးမှနျရာကို ယူဆပွောဆိုသညျကွောငျ့ရာထူးမှ မကွာခဏ ခခြွငျးခံရသညျ။ အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျက မငျးတုနျးမငျးကွီးနှငျ့ အယူအဆမတူ၍ တဈကွိမျ၊ က နောငျမငျးသားလုပျကွံခံရအပွီး ဗဈြရညျသညျ ဆေးခါးကွီးနှငျ့တူကွောငျး၊ အနညျးငယျသောကျက အပွဈမရှိကွောငျးပွောဆိုသဖွငျ့ ဒုတိယအကွိမျ ရာထူး အခခြံရသညျ။ တတိယအကွိမျရာထူးခခြံရပုံက သူမို့သာလုပျရဲသညျဟု ဆိုရမညျ။ အဖွဈကတော့ဤသို့တညျး……
တဈခါသျောမငျးတရားကွီး၏ သ ဘောလှဲမှားနမှေုကို အကွောငျးပွု၍ ဘုရငျမငျးမွတျသညျ အဈမ၊ နှမ၊ သမီးကညာအပျနှငျးခွငျး၊ တံစိုးလကျဆောငျဆကျသခွငျးကို အကွောငျးပွုလကျြအတကျပညာမရှိသူမြားကို ဝနျကွီး၊ အမတျစသညျဖွငျ့ခနျ့အပျခဲ့သျော တိုငျးပွညျပကျြတကျကွောငျး ဘုရငျမငျးတရားကွီးအား မထောကျမညှာ ဝဖေနျထောကျပွ လြောကျထားလိုကျသညျ။ ဤတငျမငျးတုနျးမငျးတရားကွီး၏ စိတျတျောဆိုး၍ ဦးဘိုးလှိုငျအား သူ၏ဖခငျယငျးတျောဝနျကွီးအား ကှပျမကျြခဲ့သော လှံကို ပွသလကျြ ထိုးမညျပွုရာ ရငျကိုေ ကာ့လကျြ “ထိုးတျောမူပါ ဘုရား” ဟု လြှောကျတငျခဲ့သညျ။ မငျးတုနျးမငျးက မထိုးပဲလှံကို ကိုငျ၍ အတှငျးတျော ဝငျသှားသောကွောငျ့သာ အသကျခမျြးသာရာရလသေညျ။ အခွားဝနျကွီးမြားက အတှငျးဝနျ ဦဘိုးလှိုငျအား ဤမြှတငျးတငျးမာမာ ဘုရငျကို ပွနျမလြှောကျသငျ့ကွောငျး ၀ိုငျး၍ ပွောကွသညျတှငျ ဦးဘိုးလှိုငျမှ ပွနျပွောကွား သော စကားမှာ တနျဖိုးရှိလှပသေညျ။ ဦးဘိုးလှိုငျက….
“ကြှနျုပျအား လှံဖွငျ့ထိုး၍ သရေခွငျးကား မွတျပါ၏။ နရောတိုငျးမငျးအလိုလိုကျ၍ ဆောငျရှကျပေးနရေပါမူ မကောငျးမှုဖွဈပှားလာပါက နိုငျငံတျောပကျြစီးခွငျးရောကျလသေညျ ဟု နာမညျဆိုးဖွငျ့ ကနျြရဈခဲ့သျော သရေကြိုးမနပျ” ဟူ၍ပငျဖွဈလသေညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ မငျးလိုလိုကျ မငျွးုကိုကျ မခစားသောကွောငျ့ တတိယအကွိမျရာထူးမှ ကလြသေညျ။
Previous post ခင်ခင်ကြီးရုပ်ထုကို ဖက်ထားဖို့အတွက် မှန်ရိုက်ခွဲပြီး နန်းဆောင် အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သူကို အရေးယူ
Next post ပုသိမ်မြို့ ပုသိမ်ရဲစခန်းတွင် တရားခံ (၃) ဦးမှ အချုပ်ခန်းဖောက်ထွက်ပြေး၊ ရဲ (၅) ဦးအချုပ်ထဲရောက်